ကဥဒံဥန႕ဥ Tagle ပဏထီဥတႈကမဥလ႕ ပွၚလ႕အဟံးနဥ့တႈဘ်ဳး ဖဲတႈဆါသံသႀတိဏအကတီႈ | Radio Veritas Asia
ကဥဒံဥန႕ဥ Tagle ပဏထီဥတႈကမဥလ႕ ပွၚလ႕အဟံးနဥ့တႈဘ်ဳး ဖဲတႈဆါသံသႀတိဏအကတီႈ
Cardinal Tagle-Photo by Roy Lagarde
ကဥဒံဥန႕ဥ Tagleယ ဒ္အမ့ႈပွၚဘဥမူဘဥဒါ ဘဥဃးဒီး တႈရၚလီၚတႈသးခုအကစီဥ (Prefect of the Congretagion for the Evangelization of People) စံး၀ဲလ႕ ပွၚတနီၚနီၚက်ဲးစ႕ၚမၚတႈလ႕ အ၀ဲသ့ဥအကစႈဒဥ၀ဲအဂီႈ ဒီးဟံးနဥ့တႈဘ်ဳးလ႕ပွၚဂၚအဖီခိဥ ဖဲတႈဆါသံသႀတိဏအံၚအကတီႈနဥ့လီၚ’
ဖဲပွၚအါဒံအါဂၚသ့ဥတဖဥ ဘဥတူဥဘဥတႈဒီး တႈအိဥဖွီဥအိဥဎဏ ဆူဥထီဥဒီးဆူဥထီဥ၀ဲအကတီႈယ ပွၚတနီၚနီၚ လ႕အမ့ႈတႈဖံးတႈမၚအကစႈသ့ဥတဖဥ ဟံးနဥ့တႈဘ်ဳးလ႕ ပွၚဂၚအဖီခိဥအဂ့ႈ, ဒီးပွၚလ႕အသ့မၚနဥ့က်ိဏစ့အထိးနါသ့ဥတဖဥ သ့ဥညါ၀ဲလ႕ အကဘဥဟံးနဥ့တႈဘ်ဳးလ႕ ပွၚဂၚအတႈသူဥအုးသးအုး ဒီးအတႈလိဏဘဥတႈသ့ဥတဖဥအဖီခိဥ ဒ္လဲဥဒ္လဲဥအဂ့ႈ ကဥဒံဥန႕ဥအံၚ စံး၀ဲဖဲ ၂၀၂၀ လါစဲးပတ့ဘ႕ဥ ၈ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’
တႈဆါသံသႀတိဏ ဒုးအိဥထီဥလံ၀ဲတႈဖွီဥတႈဎဏ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအါအါကလဲဏယ တႈဂ့ႈကီလ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥသ့ဥတဖဥအါထီဥဒီးအါထီဥ၀ဲအသိး ပွၚလိဏဘဥ၀ဲ Caritas အတႈမၚစ႕ၚတႈအါနဥ့အမ်းကဎၚတကဎၚယ ပွၚအါဒံအါဂၚသ့ဥတဖဥ ဘဥတူဥဘဥတႈနးနးကလဲဏဘဥဆဥယ ပွၚလ႕အကဲဒိဥထီဥ၀ဲသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲယ ဒီးကဲထီဥတႈမၚဆူဥထီဥ တႈနးတႈဖွီဥ ဒီးတႈသံအဂ့ႈ ကဥဒံဥန႕ဥ Tagle စံး၀ဲနဥ့လီၚ’
Cardinal Tagle hits those who take advantage of Pandemic
CBCP News September 13 2020
ပႈဒိဥ Rev. Eugene မါစီၚလဥ (၇၅ နံဥ)ဆူကြံဏအတႈအိဥမူလ႕ဟီဥခိဥခ်႕’ ၃’၈’၂၀၂၁
ကီႈပဎီၚဖိမၚတႈလ႕ကီႈကေီဥတဲဥသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈတုႈလိဏက့ၚအီၚအ၀ဲသ့ဥဖဲတနံၚညါအံၚလ႕ ရၚမဒံကီႈဆ႕ တနံၚညါ ဟဲက့ၚနုဏလီၚလ႕ကီႈပဎီၚ ၂၀၀ ဎၚဂၚ.
လ႕ဖုဥခီဥအကီႈ ပွၚမၚတႈလိဥခိဥလိဥကြဲ အိဥလဲဥပံး အပွၚလိႈကြဲဖိတဖဥ အဂီႈ ပါပါထုကဖဥ ဒီးဟ့ဥ၀ဲတႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါ.
KNU ၀ံစိဏတီဆွ႕ အ၀ဲက်ိၚ အနဲႈရြဲႈ ပဒိဥစီၚတံတူ စူးကြံဏအသး